Shina sy ny mpamatsy Kinzon09 sy ny mpamatsy | Kinzon
Tsy misy sisin-dàlana eo anelanelan'ny takelaka fitaratra sy ny vavahadin'ny fitaratra tsirairay afaka mivezivezy malalaka na miankavia na havanana hisokatra ho an'ny fitrandrahana na fikasana fanadiovana miaraka amin'ny rafitry ny gliosida Kinzon09. Ny fipetrahana na valim-baravarana amin'ny alàlan'ny ampahany na fanokafana. Ny mampiavaka ny rafitra glazing Kinzon-java-bolo dia mahatonga ny fanadiovana ny varavarankely ho mora, afaka manadio ny hiverenana sy fehin-kibo miaraka amina veri-fitaratra tsirairay ianao.Ny lavarangana napetraka miaraka amina rafitr'asam-baravarankely Kinzon09 dia toa balkana vita amin'ny mangarahara, izay tsy vitan'ny ihany. ' t manimba ny endrika sy ny toeran'ny tranobe, fa koa manome anjara be dia be amin'ny hatsaran-tarehy manan-danja amin'ny lavarangana.
Rafitsary glazing system-kinzon09
Endrika rafitra ho an'ny rafitra fangalarana fantsom-baravarankely Finzone09
1. Ny mombamomba mivaingana: Ny arabe ambony dia 3mm ny hateviny ary ny lanjan'ny teboka dia 5mm matevina ho an'ny rafitra glazing fantsom-baravarankely Finzone09. Ny sakan'ny mombamomba ny fitaratra dia 29mm ary ny haavony dia 41mm, ny lanjan'ny teboka dia 2,5mm matevina ho an'ny rafitra glazing fantsom-baravarankely Finzone09.
2. Rollers: Finzone09 glazing rafitra dia mampiasa kodiarana mitondra kodiarana lehibe ary milolosana moramora. Ny halavan'ny kodiarana mitondra kodiarana dia 36mm ary 11mm ny haavony.
3. famaky Hinge: Finnaire farafara Finzone09 dia mampiasa SS304 ho an'ny famaky hantsana mba ahafahana mivaona lanja lehibe.
4. Ny satroka fiarovana: Finzone09 rafitra mihazakazaka fantsom-piainana dia ampiharina amin'ny sela miaro nylon amin'ny mombamomba ny fitaratra mba tsy handratra. Miaro amin'ny tohatra ny fiarovana ary tsara kokoa ny famehezana.
5. Fanisiana tombo-kase tsara kokoa: tsy misy elanelana misy ny mombamomba ny làlan'ny track and glass. Finovone09 ny rafitry ny glazing fantsom-bavahady dia tsy misy elanelana eo amin'ny takelaka fitaratra voalohany sy farany miaraka amin'ny mombamomba ny lafiny.
rafitry ny glazing malaza
Vera vera na vera miloko fitaratra
Fahadisoan'ny mombamomba ny track
Nahay nanadio ny varavarankely niditra sy nivoaka
Tsy misy endrika aluminium eo anelanelan'ny solomaso
Fampahalalana: fitaovana vita amin'ny Aluminium ampiasaina 6063T5 ho an'ny profil.
Fanisiana tombo-kase tsara: tsy misy hantsana mampisaraka ny mombamomba ny pejika sy ny fitaratra fitaratra. tsy misy elanelana eo amin'ny takelaka fitaratra voalohany sy farany miaraka amin'ny mombamomba ny lafiny.
Rollers tsara kokoa: Ampiasao kodiarana lehibe ary aolivezy milamina. Ny halavan'ny kodiarana mitondra kodiarana dia 36mm ary 11mm ny haavony.
Tsy misy rivets: asio lakaoly manokana mampifandray ny mombamomba ny fitaratra sy ny fitaratra, tsy misy rivets sy lavaka amin'ny mombamomba ny fitaratra.
Hardware fifandraisana: Ampiasao ny SS304 hampifandray ny mombamomba ny làlan-kizorana mba hahazoana antoka ny fifandraisana maharitra.
Fitaratra: Ampiasao ny vera 8mm vera na vera miloko 4 + 4.
Previous: Loharano orinasa Fitaovana Handrail With Glass - Aluminium Bi Fold Door JR75 - Kinzon
Manaraka: Valam-baravarankely Kinzon50
Ny varavarankely tsy misy fotony Kinzon09
Varavarankely fitaratra Kinzon50
Sliding Window Window Kinzon50